Maxay tahay sababta uu Prof. Samantar uga qayb qaatey dagaalka Tukaraq? – Xeernews24
10. Juli 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Dhulka Soomaalidu degto waxay u kala qaybsan yihiin beelo, haddaba dhulka uu booqday ee dagaaladu ka socdaan waxaa deggan Beesha Dhulbahante oo ciidamo badan ay ka joogaan jiida dhanka Puntland kuwaas oo dagaal ugu jira in ay xoreeyaan gobolka Sool, Adduunku waxa u ugu yeedhaa gobaladaas meel muran ku jiro sababta ayaa ah koox kamid ah beesha oo xilal ka haya labada maamul.
Prof. Axmed Ismaaciil Samantar oo shaqadiisi hore ka bilaabey Weriye laanta afsoomaaliga ee BBC ayaa muddo dheer ahaa macalin ka tirsanaa Macalester College ee dalka Maraykanka, sanadkii 2011 waxa uu ku dhawaaqey Xisbi siyaasadeed oo la magacbaxay Hiil Qaran. Prof. Samatar si lamid ah walaalkiis waxaa u kamid ahaa codadka ugu dhaadheer ee ka so horjeeda Somaliland iyo qaddiyadeeda gooni isu taaga.
Sannadkii 2012 waxa u kamid noqdey Baarlamaankii Soomaaliya, waxaana uu u tartamey xilka Madaxweynaha waxaana uu helay 8 cod oo keliya, muddo kadib waxa uu ka baxay Baarlamaanka kadib markii uu kamid noqon waayey golihii wasiirada oo aad u daneynaayey in uu noqdo Wasiirka Arrimaha Dibada, oo markaas oo la magacaabey Fawsiya Yusuf.
Sannadkii 2015 Prof. Axmed Ismaaciil waxa uu u diga rogtey maamulka Somaliland, muddo kadibna waxa uu ku biirey xisbiga Kulmiye, laakiin nasiib darro waxa uu aad u doonaayey in uu noqdo Musharaxa Madaxweyne ku-xigeenka taas oo iyaduna noqotey mid uu ku fashilmey. Tan iyo markii uu u wareegay Somaliland wax xil ah kama qaban aan ka ahayn in uu kamid yahay Xisbiga talada haya ee Kulmiye.
W/Q: Maxamed Cismaan.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/07/samatar.jpg 194 259 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-07-10 17:26:202018-07-10 17:26:20Maxay tahay sababta uu Prof. Samantar uga qayb qaatey dagaalka Tukaraq?
Maxaa kasoo baxay kulankii qarsoodiga ahaa ee Abiy Ahmed iyo ONLF? R/wasaaraha itoobiya Aby Axmed oo Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar u gudbiyey...